AKHRISO+XOG: Yaa noqonaya RW Itoobiya oo saacadaha dhaw lagu dhawaaqayo, Yaase kamid ah 7-da nin ee ku loolamaya? – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAAKHRISO+XOG: Yaa noqonaya RW Itoobiya oo saacadaha dhaw lagu dhawaaqayo, Yaase kamid ah 7-da nin ee ku loolamaya?
AKHRISO+XOG: Yaa noqonaya RW Itoobiya oo saacadaha dhaw lagu dhawaaqayo, Yaase kamid ah 7-da nin ee ku loolamaya?
Qofka hogaamiyaha xisbug loo doorto ayaa noqon doona ra’isalwasaraha cusub ee dalka Itoobiya.
Qofka la doorto ayaa mas’uuliyad adag qaadi doona iyadoo wadanka ay ka jiraan mudaaharaadyo rabshada wata.
Rai’salwasaarihii hore ee Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa 15-kii febaraayo ku Dhawaaqay in uu iska casilay xilka raisal-wasaaranimada iyo gudoomiyha xisbig EPRDF, jagadaasi oo uu hayay tan iyo 2012-kii
Xisbiga is bahaysiga EPRDF waxa uu ka koobanyahay afar xisbi siyaasadeed oo ka kala socda qoomiyadaha ugu waawayn dalka Itoobiya.
Balse khilaaf soo kala dhex galay isbahaysigan ayaa adkeeyay in la saadaaliyo qofka uu noqonayo ra’isalwasaaraha xiga ee dalka Itoobiya.
Isabahaysigan ayaa talada wadanka hayay tan 1991 ka dib markii ay burburtay dowaladdii ka horeysay .
Waa kuwaan toddobada shaqsi ee u sharraxan qabashada xilka rai’sul wasaaraha Itoobiya.
47 jirkan ayaa ku dhashay kuna soo barbaaray bariga Welega ee gobolka Oromiya.
Waxa uu sidoo kale ogolaaday in uu wadahadal la yeesho ururada mucaaradaka dalkaasi.
Waxaa loo arkaa in uu yahay musharax awooda in uu mideeyo wadanka, balse waxa ku adag waddadii uu u mari lahaa in uu ku fariisto kursigaasi sababtoo ah ma aha xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka.
Waa gudoomiya xisbiga OPDO, waxaana loo arkaa in uu yahay qofka loo badinayo in uu bedelo ra’isalwasaarhii hore.
Waa siyaasi rug caddaa ah sidoo kalana aqoontiisu ay sarreyso.
Waxa uu la soo shaqeeyay Milatariga waxaa uuna gaaray jagada Korneel.
Mr Debretsion waxa uu ku dhashay Shire oo ku taalla waqooyiga gobolka Tigeeryda, Waxa uu dhiganayay oo uu dhexda uga tagay isga oo dhamaysan jaamacadda Addis Ababa, waxa uuna ku biiray koox hubeeysan oo ka soo hor jeedday dowladdi markaasi jirtay.
Markii dambe waxa uu aaday dalka Talyaaniga halkaasi oo uu ku soo qaatay tababar ku saabsanaa Tiknoolajiyadda.
Markii uu waddanka dib ugu soo laabatay waxa uu gobolka Tigreeyda ka asaasay Idaacad lagu magacaabo “Dimtsi Weyane”.
Markii isbaheysiga EPRDF uu la wareegay talada wadanka waxa loo magaacabay ku xigeenka madaxa Hay’adda Sirdoonka Qaranka.
Haatan waa gudoomiyaha xisbiga TPLF ahna wasiirka warfaafinta.
Waa ra’isalwasaare ku xigeenka waddanka.
Waxaa uu xisbiga is bahaysiga ee EPRDF ku biiray ka dib markiii uu dhameeyay jaamacadda, sanado yar ka dibna waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka gobolka Amxaarada.
Bartamhii sanadkii 2000 waxa uu noqday madaxweyne ku xigeenka gobolka Amxaarada, sanad ka dibna waxa uu ka mid noqday xubnaha sarsare ee xisbiga ANDM.
Sanaddkii 2013, waxaa loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka isbahaysiga EPRDF.
Ka hor inta uusan siyaasadda ku soo biirin waxa uu ahaa macalin,waxaa uu soo noqday Wasiirka Waxbarshada ee dalka Itoobiya.
Workneh Gebeyehu waa wasiirka arrimaha dibadda ee hadda xilka haya
Waa xubin ka tirsan xisbiga OPDO islamarkana ah wasiirka arrimaha Dibedda ee Itoobiya.
Waxa uu dhashay lixdameeydii waxa uuna sanado badan soo ahaa Taliyaha Booliiska ee dowladda Federaalka.
Dhammaadkii sanadkii 2000 waxaa loo magacaabay wasiirka gaadidka jagadaas oo uu hayay muddo afar sano ah.
Waa wasiirka gaashandhiga ee Itoobiya .
Waxa uu inta badan ka soo muuqdaa warbaahinta marka ay dowladda ay ka hadleeyso xaaladaha amarka degdegga ah ee uu wadanka ku jiro.
Waa xubin ka tirsan xisbiga SEPDM oo ah xisbiga uu iska casilay ra’isalwasaarahii hore waxaana loo magacaabay gudoomiye ku xigaanka xisbiga
Waa xoghayaha isbahaysiga EPRDF, Waxa uu soo noqday wasiirka Waxbarashada ee Itoobiya.
Waxa uu ku dhashay Haroressa oo ku taalla gobolka Galbeedka Itoobiya.,Waxa uuna horey u ahaan jiray macallin ka hor inta uusan siyaasadda ku biirin.
Dadka qaar ayaa sheegaya in doorashada loo doortay in uu noqdo gudoomiyaha xisbiga SEPDM ay u gogol xaarayso suurtagalnimada in uu noqdo ra’isulwasaaraha xiga ee Itoobiya.
Ciidamo Itoobiyaan ah oo Qarax lagula eegtay degaanka Yurkud….
Agaasime ku xigeenkii hore ee FBI-da oo soo bandhigay warqad sir ah…
52,842 total views, 729 views today
52,842 total views, 729 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
52,912 total views, 729 views today
52,912 total views, 729 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
52,923 total views, 729 views today
52,923 total views, 729 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
52,945 total views, 730 views today
52,945 total views, 730 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
52,983 total views, 730 views today
52,983 total views, 730 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]